Blog – Page 20 – Kathmandu Baptist Church 'Ebenezer'
January 25, 2017 Posted By: admin Articles Aenon Editorial No comments yet
गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान नेपालका पूर्व राजा महेन्द्रको अवधारणा थियो। विक्रम संवत २०२० को दशकमा आएको यो अवधारणाले यो पुष्टि गर्दथ्यो कि नेपालका गाउँहरू क्रमिक रुपमा रित्तिदै थिए र उपत्यका तथा समथर भूभागहरूमा शहरीकरणको विकास द्रूत रुपमा भइरहेको थियो। सदरमुकामहरू धमाधम टाकुराहरूबाट बेसीहरूमा झर्दै थिए। यस्तो स्थितिमा न राजा गोर्खा...
December 7, 2016 Posted By: UJ Gurung Articles 1
म किन ईशाई हुँ? यो जाहेज प्रश्न हो। म किन आज जे छु त्यो छु? म किन जे गर्छु त्यो गर्छु? म किन भिन्न छैन? मेरो देशका लगभग ९८ प्रतिशत मानिसहरुले नमान्ने मत म किन मान्दछु? के म देश द्रोहि हुँ? के म पागल हुँ? सायद पश्चिमी प्रभावको हुरिबतासले मलाई...
November 26, 2016 Posted By: UJ Gurung Articles No comments yet
ख्रीष्टियनहरूको संख्या वृद्धिमा नेपाल विश्वमै अग्र पंक्तिमा पर्दछ। नेपालमा १२ जनाको संख्या देखि ३००० जना सम्मको सदस्यता रहेका स्थानीय मण्डलीहरू संचालित छन्। अधिकांश ठूला तथा नेतृत्वदायी मण्डलीहरू राजधानी तथा देशका प्रमुख शहरकेन्द्रित रहेका छन्। तर ग्रामीण क्षेत्रका मण्डलीहरूमा युवाहरूको भारी कमी आएको छ। शिक्षा तथा रोजगारीका निम्ति युवाहरू शहरकेन्द्रित...
November 20, 2016 Posted By: admin Articles Biblical View of Women No comments yet
अनेक रुपमा रुमलिँदै, अनुशासन र अधिनताको परिधिमा रहेर सबैलाई प्रेम, आदर, स्नेहर र माया दिने तिमी हौ नारी। परमेश्वरको इनाम स्वरुप हकको सम्पत्ति हुन जन्मसँगै सुरु हुन्छ तिम्रो अस्तित्त्व (भजनसंग्रह १२७:३; १४४:१२)। एक असल छोरीको चरित्र अँगाल्दै, ख्रीष्टको प्रेममा, बाबुआमाको अधिनमा हुर्कदै अनि बढ्दै जान्छौ। तिमी छोरी महलको समानतामा कुँदिएको...
November 20, 2016 Posted By: admin Articles Heavenly Home No comments yet
June 7, 2016 Posted By: UJ Gurung Articles No comments yet
Afteralong wait with prayers and earnest desires, May 4th came when we flew with Yeti Airlines. This airline was well-known for flying on time. Nepalgunj welcomed us with about 40 degree Celsius temperature. But Hotel ‘Siddartha’ hasalot to do for us. Indeed, it made us...
बैसाख १३ मा नेपाल एयरलाइन्सको ट्वीन अटर जहाज त्रिभुवन विमानस्थलबाट तोकिएको समय भन्दा २ घण्टाले ढिला १:३० बजे जुम्लाको निम्ति उड्यो। उक्त विमान पोखरा विमानस्थलमा दिउँसोको २:०८ मा उत्र्यो। पोखरा विमानस्थलबाट उक्त विमानले जुम्लाका निम्ति २:२० मा उडान लियो। जहाज जाजारकोट, दैलेख हुँदै अघि बढ्ने क्रममा दैलेखको पहाडी भागमा घनाघोर...
मेरो जन्म २०५२ माघ १४ गतेका दिन ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा भएको थियो। सानै देखि मनलागेको कुरा नपाए मन दुखाएर बस्ने, बाहिर प्रकट गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिको थिएँ। झगडा गर्न र रिसाउन पछि पर्दिन थिए। रिसाउने त बानी नै भईसकेको थियो। मेरो जीवनमा सानै देखि नै केही अवस्मरणीय घटनाहरू घट्न पुगे,...
थुप्रै सन्तान र आफन्त भएका; थुप्रै वर्ष वाँचेका मानिसको मृत्यु हुँदा उनको सम्मानित दफन गरिएन भने त्यो दु:खद हो भनिएको छ (उपदेशक ६:३)। यस मानेमा अनन्तताको वल्लो पाटाका अन्तिम उपलब्धि मृत अवस्थामा पाइने सम्मानित दफन देखिन्छ। परमेश्वर आफैंले प्रधानदूत माइकलद्वारा मोशाको शबलाई दफन गर्नुभई मोशाप्रतिको आफ्नो प्रेम र वास्ता प्रकट...
April 28, 2016 Posted By: UJ Gurung Articles No comments yet